Yamamoto oo kulan albaabada u xiranyihiin la yeeshay Farmaajo | Keydmedia
Yamamoto oo kulan albaabada u xiranyihiin la yeeshay Farmaajo
Kulanka ayaa ka dhacay qeybta VIP ee garoonka, waxaana Madaxweyne Farmaajo loogu baaqay in uu doono Madaxda Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka maqnaa shirka Dhuusamareeb 3.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka Mareykanka u joogo Soomaaliya ee Downal Yamamoto ayaa kulan albaabada u xiranyihiin Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho kula yeeshay Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Kulankaan oo ka dhacay qeybta VIP ee Garoonka ayaa waxaa sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ku wehliyay madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo kala soo amba baxay magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug, galabnimadii Jimcaha.
Downal Yamamoto ayaa Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu doono madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aan ka qeyb gelin shirkii Dhuusamareeb 3, islamarkaana kulan kale la qabto sid afgarad looga gaaro arrimaha taagan, oo wada-tashi labada dhinac ah u baahan.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa loogu baaqay in isku keeno dhinacyada ka gaduudsan natiijada shirka, si loo soo saaro go'aan wada ogol laga yahay oo ku saabsan doorashada dalka ee 2020/21.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Madaxweyne Farmaajo ku cadaadinayo in uu gogosha la fariisto dhinacyada ka soo horjeedo si loo jeehiyo nidaamka doorashada dalka oo maalmihii la soo dhaafay ahaa mid habow ah, inkastoo weli maamulada Puntland iyo Jubbaland ka gowsa adeegayaan ficillada Farmaajo.